Date My Pet » 5 Mitemo Wokuva Izayakaku
Last updated: Mar. 31 2020 | 2 Maminitsi verenga
Kuva yakavimbika uye nyanzvi Izayakaku parutivi rwako vanogona kusarudza iwe achasiya aine mukadzi wakanaka kana Solo. pazasi, hatina paainyora yakanakisisa mitemo yokuva mukuru Izayakaku.
mutemo #1: Uyo anosvika kutanga, Anosarudza
chokwadi, zvinoda kushinga kutaura boka revakadzi uye nditange kukurukura nokuda ngozi apfurwa pasi kana kwete kurova rugure. Zvinodawo unyanzvi kutaura vakadzi yakarurama. Nokudaro ushe vedu vokutanga: ani zvinobudirira anosvika wokutanga, anowana chisarudzo wokutanga vakadzi.
mutemo #2: Itirawo shamwari dzako rworudyi
Vakadzi kudzidza zvakawanda pakuongorora kunyanya vanenge varume vanofarira. Act seshamwari dzako ndidzo coolest vanhu imi munoziva. Kwete chete zvichaita chivimbo ichi anopenya kure asi mukadzi vaizokurumidza kuva achaita zvikuru kukwezvwa iwe. Ditching shamwari dzako kuti mukadzi dzaunoziva kwemaminitsi gumi chete kunoratidza kuti uri nezano.
mutemo #3: Remekedza reshiyo
Kana shamwari yako kutaura chimwe vasinganzwisisike nhamba yevakadzi, tora kuti sezvo zano kutaura boka kubatsira yokufudza reshiyo. yeuka, kana iwe anopedzisira kurova nayo kure pamwe chete musikana zvikurukuru, uchiri vanofanira kugara neboka. Achisiya naye kuti mukadzi achasiya yenyu Guy Izayakaku zvishoma izvo zvinoreva iwe vakakundikana. The chete nguva zviri kunaka kusiya chinhu kana nhamba iri kunyange. Kuti nzira imi vaviri kuwana woga nguva nevakadzi vakanaka.
mutemo #4: Ita uti chii shamwari yako asingakwanisi
Kutonga uku kunokosha nokuda wingmen. Kumirira kusvikira shamwari yako anoenda yokugezera kana anobata chokunwa uye kutaura pamusoro wake yakanakisisa unhu nenzira isiri zvakananga nzira. For bhonasi pfungwa, regai kutaura zvakananga musikana anofarira. Taura neshamwari dzake uye kumirira kusvikira kudzokorora.
Kuti abatsire kudzivisa shamwari yako kungokurumidza zvakananga, kana sokuti usiku ari ichitenderera pasi pfungwa imwe chokunwa rokupedzisira kana kufamba pamusoro pemba kuva zvinoshamisa maonero.
mutemo #5: Act rakaita mutambo uri pamusoro
Kamwe munoona kuti sesasaradzi pakati shamwari yako uye mukadzi ane hanya, kutanga kuita uye kutaura sezvinoita vari kare vakaroorana. chidobi iyi “framing”, vachava chinhu chinoshamisa chaizvoizvo sezvo vakadzi dzinotambura dzesub-kukurukurirana kupfuura zviri chaizvoizvo kutaurwa.
With ichi munda muperekedzi muruoko, imi wagadzirira kuva inobudirira usiku pamusoro guta ikozvino.